Waxabajjii 07, 2017
Ministriin dhimmootii kominikeeshinii Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo kaleessa galgala gaazexeessota biyyootii alaaf ibsa kennan irratti Kibxata darbe kan addaan cite dhimma tajaajila interneetii ture.
Ministrichi akka jedhanitti tajaajilli interneetii guutummaan kan cufame guyyoota lamaa hamma sadii qofaatti. Kunis caasaalee hawaasaa ykn social midea qofaa irratti ta’uu dubbatu.
Tajaajilli interneetii hangi tokko hojjetaa kan jiru si’a ta’u tarkaanfiin kun kan fudhatameef akeeka ijoo tokko qofaafi jedhu Dr. Nagariin.
Har’a mobaayila keessan harkaa irraa social midiyaa argachuu dhiisuu maltu. Sababaan isaas daataan mobaayilaa waan cufameef. Waajjira keessanii garuu interneetii argachuu dandeessan. Anis waajjira kootii interneetii nan fayyadama kanneen biroonis fayyadamaa turan. Tarii guyyoota sadii jechuunis qormaanni kutaa 10 hamma raawwatamutti ta’uu mala.
Rakkoo jiru ni hubanna. Garuu kan kana goone jaal’annee miti. dantaa barattoota keenyaa eeguu qabna. Kana immoo lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatama isaa kabaju kan hojjetu jedhan.
Dr. Nagarii leencoo kan isaan irratti fuuleffatan dhimmi ka biroon naannoolee biyyattii gama bahaa fi kibba gama bahaa honge mudate irratti ture.
Haalli hongee Sanaa jirjjiiramuu isaa kan dubbatan Dr. Nagariin naannoleen sun rooba argataa jiraachuu isaaniif bakka tokko tokkottis lolaan rakkoo uumuu isaa ibsaniiru.
Deggersi hangi barbaachisu alaa hin argamne kan jedhan minitrichi haa ta’u malee hawaasaalee addunyaa deggersa nuu godhaniif galata keenya dhiyeessuu feena jedhan.
Balaa dhufuu malu dura dhaabachuuf garuu mootummaan qophee barbaachisu gochuu isaa dubbatan.
Kaarikulamiin Haaraan Tartiiba Dubbisa Qubee Afaan Oromoo Jijjiire Wal-falmsiisaa Ta’aa Jira
Kiristiyaanoo Ronaaldoo faatii Juventuus jaanjessuma jaanjessanii goolii afur itti guuranii waancaa Awurooppaa irraa fudhatanii galtaniin
"Qaataar Shororkeessummaa Gargaarti" Jechuudhaan Biyyoonni Jaha Hariiroo Dippiloomaasii Irraa Kutatan
Halellaa Landanitti Godhameen Walqabatee Amma Ammaatti Shakkamtoonni 12 To'annaa Jala Oolfaaman
Kutaa Sudaan Kibbaa Yeyi Riivar Jedhamu Keessatti Lola Dhaabinsi Tolfame
Prezidaant Traamp Akka Biyyi Isaanii Walii-galtee Kunuunsa Qilleensa Naannoo Biyyoonni Addunyaa Gara Dhibba Lamaa Mallatteesanii Turan Keessaa Akka Baatu Kaleessa Labsuun Addunyaarrtti Qeeqa Hedduu Kaase